Kelley: Ninkii jeegga been abuurka ah ku iibsaday gaariga | Radio Himilo
Home / Madadaalo / Kelley: Ninkii jeegga been abuurka ah ku iibsaday gaariga
Himilo – Waxa uu go’aansaday inuu aado dukaameysi si Jeeg been abuur ah oo uu ku daabacay kombuyuutarka gurigiisa yaalla ugu soo iibsado gaari joogga $140,000, isku-daygaasi oo ugu danbeyntii ku guulleystay.
Casey William Kelley, ayaa la qabtay isaga oo mar kale doonaya inuu seddax saacadood oo noocoodu yahay Rolex kuna kacaya adduun dhan $61,521 ku iibsado jeeg kale oo been abuur ah, waxaana la dhigay xabsiga.
Sida ay sheegeen boliiska degaanka Walton ee gobolka Georgia ee wadanka Mareykanka, 42-jirkan ayaa laga qabtay dukaan lagu iibiyo dahabka oo ku yaaalla Miramar, xilli uu sugayay in lagu wareejiyo saacado uu ku iibsaday hab khiyaano ah.
Casey William Kelley, waxa uu qirtay inuu gurigiisa ku daabici jiray Jeegag been abuur ah, waxaana loo heystaa eedeeymo ah xatooyo gaari iyo khiyaano, inkastoo uu ku dooday in laga xaday gaarigii uu ku iibsaday Jeeggii been abuurka ahaa.
Previous: Joe: Kaddib muddo uu shaqo la’aan ahaa waxa uu ku guulleystay bakhtiyaal-nasiib
Next: Isco oo ka doorbiday Arsenal iyo Everton koox Spain ah